Akụkọ - Ngwa maka ịmị amị na CNC vetikal lathe
Single Ahịrị Crossed Roller Slewing Iburu
Single Ahịrị Anọ ebe Kpọtụrụ Ball Ball N'ịgba
Ugboro abụọ Ahịrị Ball Slewing agba
Atọ ahihia Roller agba agba
Mkpa Nkebi lemịcha amị
Flange ụdị Slewing Iburu
SE Usoro Slewing Drive
WEA Series Slewing Mbanye
Ngwa maka slewing amị na CNC vetikal lathe
Na CNC vetikal lathe akụrụngwa, na egbu egbu ibu bụ otu n'ime ndị isi mmiri na-egosipụta igwe n'ozuzu arụmọrụ ma na-achọpụta machining ziri ezi nke workpiece. Anyị na-achọ ka ọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma na-eguzogide nnukwu ihe eji arụ ọrụ n'otu oge ahụ, na-eme ihe ziri ezi na-agba ọsọ na nnukwu mgbatị ikike torque, na egbu egbu ibu bụ isi ihe iji mezue nkwado table.The nwụnye na preload ukpụhọde nke turntable na-egbu Iburu dịkwa ike, na itinye n'ọnọdụ siri ike iji hụ, mkpokọta nkenke nke okpokoro siri ike imeziwanye.
N'ihi ya, ndị ọzọ kọmpat gafere ala na-egbu biarin eji na-enye ihe onwunwe na-eri ego, mfe imewe ngwọta, elu amachi gbapụrụ ọsọ, mma na-agba ọsọ ziri ezi na kwụsie ike, na elu ibu ibu ikike na rigidity. Isiokwu a na-akọwaampi maka na-egbu Iburu na CNC vetikal lathe iji mezuo njirimara injinia ha zuru oke.
1.Run-apụ ziri ezi
Tụle bearing ọsọ-pụọ enwere ike kewaa n'ime mmekọrịta ọsọ ọsọ na nke enweghị nsogbu, nke enwere ike ibelata mmetụta nke mmebi iwu na mkpokọta nke okpokoro site na egweri tebụl. na-egbu Iburu asynchronous ọsọ-pụọ, nke nta nke ikpeazụ radial na axial ọsọ-pụọ nke worktable na elu na-agba ọsọ ziri ezi. Na nhọrọ nkena-egbu Iburu ika na nkenke larịị, ọ na-atụ aro bụghị naanị na-elekwasị anya na-egbu agba nzukọ ọsọ-pụọ, ma kwesiri inwe nghọta miri emi banyere mmetụta nke na-egbu Iburu asynchronous run-out nkenke ụkpụrụ.
2.Sdị na nnagide ọnọdụ
Na egbu egbu ibu aro arịọnụ ebupụta na mgbanaka gia chọrọ flatness, perpendicularity, roundness na cylindricity na-agbanwe agbanwe na nkenke na-egbu biarin. Chịkwa ụdị ndị a na nnagide ọnọdụ abụghị naanị na-enye nkenke nzukọ ka mma, kamakwa na-ezere nrụgide nrụgide nke oke mmụọ nkeihe slaing mgbanaka mgbanaka dị n’ime na n’èzí ma gbatịa ndụ ọrụ nke na-egbu Iburu. Banyere ụkpụrụ nhazi nke ụdị na slaing mgbanaka ọnọdụ ndidi, a na-atụ aro ka ị kpọtụrụ anyị ozugbo iji kwekọọ na nke ha na-egbu agba agba.
3. Axial preload
Nnwale ọnwụnwa nke CNC lathes na-akwụ ụgwọ dị ukwuu na njedebe nke ihu njedebe nke mpempe akwụkwọ na okirikiri, na otu igodo iji chọpụta arụmọrụ ya bụ nkwụsi ike nke usoro ahụ. Nkwesi ike nke sistemụ ahụ na-agụnye nnabata nke usoro etiti, nnabata nke na-egbu Iburu, wdg The rigidity nke na-egbu Iburu na-adaberekarị egbu egbu ibu axial preload.
Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịtụle mmetụta nke okpomọkụ na ibu, ma setịpụ axial preload nke na-egbu Iburu.
Xuzhou Wanda Slewing Iburu Co., Ltd.